Niparitaka avy any Guadeloupe ka hatrany Martinika ny rotaka mahery vaika COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Martinique » Niparitaka avy any Guadeloupe ka hatrany Martinika ny rotaka mahery vaika COVID-19
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Crime • Vaovao farany Brezila • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao farany Martinique • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Voalaza fa tezitra ireo mpitokona noho ny tsy fandraisan'ny governoran'i Martinika azy ireo tamin'ny fiafaran'ny andro voalohany nanaovany fihetsiketsehana.
Omaly, sendikà 17 ao amin'ny nosy teratany frantsay any Martinika no niantso fitokonana faobe hanehoana ny fanoherany ny fepetra momba ny vaksiny COVID-19 ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny fametrahana ny pasipaoro ara-pahasalamana coronavirus any Frantsa.
Saingy nivadika haingana ny fihetsiketsehana Guadelouprotaka mahery setra amin'ny fomba elektronika miaraka amin'ny tatitra momba ny polisy sy ny mpamono afo ao MartiniqueNy renivohitr'i Fort-de-France dia iharan'ny tifitra variraraka.
Nitombo ny toe-draharaha rehefa voalaza fa tezitra ireo mpitokona noho ny tsy fandraisan'ny governoran'i Martinika azy ireo tamin'ny faran'ny andro voalohany nanaovany fihetsiketsehana.
Na dia tsy nisy aza ny naratra, dia imbetsaka no lasibatry ny tifitra variraraka ny mpitandro ny filaminana sy ny mpamonjy voina rehefa niditra an-tsehatra namono ny afo tamin’ny lalam-bahoaka tao an-tanànan’i Fort-de-France, omaly alina.
Araka ny MartiniqueNy mpitondra tenin'ny filaminam-bahoaka Joël Larcher, mpitandro filaminana sy mpiasan'ny mpamono afo dia lasibatry ny tifitra variraraka, ary fiara maromaro no nandoro nandritra ny korontana tamin'ny alina.
Nosakanan'ireo mpanakorontana ny lalana nanodidina ny nosy Karaiba frantsay ary nanao fitakiana maro tamin'ny governemanta, anisan'izany ny fampitsaharana ny didy fanaovana vaksiny COVID-19 ho an'ireo mpikarakara, ary koa ny fangatahana midadasika kokoa toy ny fampiakarana ny karama sy ny fampihenana ny vidin-tsolika.
Niparitaka avy teo akaiky teo ny herisetra Martinika Goadelopy, izay nitrangan'ny korontana taorian'ny nikarakaran'ny sendikàn'ny mpiasa fitsangatsanganana tamin'ny herinandro lasa mba hanoherana ny fameperana COVID-19 any, ao anatin'izany ny fampidirana jabs tsy maintsy miady amin'ny coronavirus ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana.